Idizayini Ehlanzekile, Yesimanje Enamagugu Aqinile Obukhulu - Idizayini Ezinkulungwaneni Eziyishumi ze-Oaks
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Idizayini Ehlanzekile, Yesimanje Enamagugu Aqinile Obukhulu - Idizayini Ezinkulungwaneni Eziyishumi ze-Oaks
2020 / 10 / 18 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 1289 0
I-Ten Thousand Oaks Design Interior Design Alliance
UMfula Ophuzi, iTaihang ende, noMfula iFen, ogudla enyakatho naseningizimu, kuxhumanisa umcengezi ongaphakathi komhlaba. Kusukela ezikhathini zasendulo, idrako ledolobha laseTaiyuan belilokhu liyigugu le-feng shui, njengetshe maphakathi nezwe eliyingozi futhi eliyingqayizivele, libona izinguquko ezingenakubalwa.
Ipaki elizayo nomfula kuzungeze maphakathi nedolobha elisha, okungenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zedolobha. Njengoba idolobha elidala elihamba phambili lihamba kancane phakathi nentuthuko esheshayo yedolobha, idolobha elisha elinamandla amasha lizokhanyisa ngamalambu alo. Ihhovisi lokuthengisa likaRongchuang lenzelwe ukuthi libe yisizinda sedolobha elisha, lapho kuzovela khona impilo entsha ekhangayo eTaiyuan Longcheng.
Intaba Nomfula Ukushona
Ukube idolobha belizomelwa ngokwakhiwa nendawo, bekuzobukeka kanjani iDragon City yaseTaiyuan? Emephini, amathafa, izintaba nemifula akugcini ngokucacisa ngokusobala indawo yedolobha, kepha futhi kulolonga uhlamvu lwayo emlandweni omude wezinguquko. Isimilo sedolobha sakhiwe umlando waso omude wezinguquko. Ayikho i-curl kanye ne-curl yedolobhana elincane eningizimu, futhi akukho ukufudumala okuminyene, okuminyene kwedolobha okufuna ukukhuluma, kepha kunalokho ubuhle obuhle nomlingiswa ongathobekile wedolobha.
Esikhaleni, imigqa eqondile nama-polylines achaza futhi ahlukanise izindawo ezahlukahlukene zokusebenza; izindawo ezinkulu zokuhlobisa impahla zenza buthakathaka imininingwane engadingekile; okunye kumnyama nokumhlophe futhi kuguquka njengesigqi esicacile; umsebenzi wobuciko nokubukeka komhlaba kungubungqabavu phakathi kwedolobha nezwe.
Kusuka esitezi sokuqala kuye esitezi sesibili, ukwakhiwa okungabonakali kwedolobha okwondliwe yizintaba, amadwala nemifula, kanye nokubekwa kwemisebenzi yobuciko nemivimbo yokwakheka engajwayelekile kuletha idolobha endaweni yomkhathi egcwele umcabango.
Ngokwesakhiwo, imigqa nokushintsha kombala, isikhala, njengedolobha, sakha isitayela saso.
Ukufaka Umkhathi Ontantayo
Kungena endaweni yokwamukela izivakashi esitezi sokuqala, indawo yokwamukela izivakashi ivulekile futhi iyakhanya, futhi ukuthungwa okumhlophe kwawo wonke umzimba kumbozwe ngamatshe amade, amancanyana amnyama aqala phezulu aye phansi, njengempophoma yetshe eligeleza lisuka intaba. Ideski lokwamukela, elakhiwe ngamatshe amnyama namhlophe, lide, lincane futhi lilula, okwenza kube lula ukukhanya uma kuqhathaniswa nendawo enkulu.
Umugqa wamalambu wehla edome kanye namajoyini amatshe ezindongeni akha ubudlelwano obunemicikilisho obuqondile nobubheke phezulu obudala umuzwa wokuphumula, ukuvuleleka nokuzinza.
Ukusuka endaweni yokwamukela izivakashi kuya kwesobunxele kuya e-sandbox endaweni emaphakathi, kuphuma ibhokisi elikhulu elikhanyayo ophahleni bese limboza phezulu kwebhokisi lesanti ngaphezulu kwetshe, nangaphansi kombala omnyama nomhlophe odongeni olungaphansi, izwe lonke lezentengiselwano IRongchuang igcwele ubungqabavu.
Kusuka esitezi sokuqala, i-handrail emnyama iyagoqa futhi ijikeleze phansi, futhi izinyathelo ezimbalwa zokugcina ezimhlophe ziwela phansi, njengokungena okuvulekile, kulindwe amakhasimende ukuthi aholele endaweni engaqondakali.
Ngaphandle kwezitebhisi, izitezi ezizihambelayo zimbozwe nge-veneer yokhuni olumnyama, futhi kusuka kolunye uhlangothi, zibheke phezulu kusuka phansi kwezitebhisi, isakhiwo sebhilidi sibukeka njengentaba ekhuphukayo ekhulayo futhi ekhula esikhaleni.
Igumbi elimnyama eliphuma esibhakabhakeni libukeka njengesikhala sasemkhathini esintantayo, isibani esimhlophe esilanyazayo nomdwebo weplanethi yensimbi kukhuluma ngamathuba okuphila kwangesikhathi esizayo, ukufakwa kanye nomdwebo wobuciko kukhombisa izimpawu zemvelo, umcabango ongapheli oqala ukuntanta endaweni yonke emnyama nomhlophe engavinjelwe, futhi indima nomsebenzi wesikhala nakho akusekho okukodwa.
Endaweni yezingxoxo eseduze kwamafasitela esitezi sokuqala, kuthuthukiswa izinto zokwakha nemibala.
Imabula yemvelo yamaminerali ifakwa phansi isuka ophahleni, kuthi ukukhanya okuthambile kwehle phansi, kuvumelanise okumnyama nokumhlophe.
Ukwengezwa kwempunga nokuluhlaza kuletha isigqi sentwasahlobo. Kukhaphethi othungiwe ngombala ompunga, usofa uthambile futhi ubumbeke njengamadwala asemhlabathini, futhi isihlalo sobukhosi esimpunga siluhlaza siyaqhubeka nalokhu. Izihlalo zezingalo eziluhlaza ngokumpunga ziqhubeka ngesitayela esifanayo, nezintaba, umhlaba namanzi kufakwa ezintweni zokwakha nefenisha, nayo yonke imininingwane enothile ihlelelwe ukudala umoya okhululekile endaweni yomhlangano.
Insimbi egelezayo, ukukhanya kwe-“annular eclipse” ebusuku kanye ne-meteorite ezulazulayo …… umsebenzi wobuciko uyaqhubeka nokuvusa futhi ubumbe kabusha umcabango wakho kule ndawo, sengathi ubuka ikhethini le-cosmic elingapheli.
Buyela ETender City
Ukugoqa izitebhisi ezizihambelayo ezimnyama nokumhlophe ziye esitezi sesibili, indawo enyakazayo nokuthungwa kwemvelo okukhula mahhala kuyancipha futhi kufakwe indawo yokuphumula evulekile kuphalethi elincishisiwe.
Izindawo ezinkulu zokhuni ophahleni naphansi zinika isikhala ukuthungwa okufana nehlathi, futhi esikhundleni sezindonga, bonisa amashalofu anobude obuhlukahlukene kanye neqiniso elihlanganisiwe lichaza izindawo ezahlukahlukene. Ukuboniswa okuhlanganisiwe kwefenisha, izincwadi nemidwebo kubuye kuqoqe imizwa yomuntu kokungapheli bese kuyibeka ezindaweni ezinokhonkolo.
Indawo yokuphumula yezingane nayo yakhelwe kule ndawo, enokhaphethi oyindilinga oluhlaza oyindilinga nefenisha yezingane ethambile, edlalayo ngemibala ecebile nenesineke, ekhombisa ukubukeka kwedolobha.
Osofa abaqinile nabanethezekile nendawo yokubasa umlilo ilenga enkabeni yokubuka idala indawo yokuphumula ephephile nehlanzeke ehlathini elisemadolobheni, lapho ungahlala phansi uzungeze iziko ngaphandle kokuphazanyisana, bese ulinda umzuzwana ukungena egumbini lokubonisa, ukuqedela inguquko ephelele yesikhala nemizwa.
Imini nobusuku, amadwala nemifula, indawo yonke nedolobha …… kusika izithombe eziphikisanayo kodwa ezihlanganisa emkhathini, kuhlanganisa isithombe sedolobha lasendulo nokwandisa imingcele yaso, njengoba indaba entsha iyavela ezixhumanisweni ezintsha zedolobha.
Idizayini Yangaphakathi: W Studio Oak Architectural Design Consulting (Beijing) Co.
Kuklanywe ngu-Hua Wei no-Song Weihua
Idizayini Yethimba: UZhao Panpan, uWang Limei, uLi Xiangyan, uLiu Qian
Ithimba A: Li Meng, Bai Lan, Zan Xiangyu, Suo Li
Indawo Yokwakhiwa: IHhovisi Lokuthengisa 1000m2
Isikhathi sokuqamba: 2020.5
Usuku lokuqedela: 2020.9
Izithombe: BUKA Izithombe Zokwakha
I-W Design iyinkampani entsha yokuklama yobungcweti eyakhiwe ngo-2015. Amalungu ayo amakhulu okuklama wonke avela emafemini omklamo owaziwa umhlaba wonke. Benza umsebenzi wokungenisa izihambi, wokuzijabulisa, wokuhlala nowasehhovisi, futhi abaklami babo abalingani nabalingani baneminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kokuklama nombono wamazwe omhlaba. Ukuzinikela kumaphrojekthi, emisha, ekuphenduleni nasezenzweni kungumphefumulo wefemu.